अाज पनि भारी वर्षा, शनिबार कहाँ कति वर्षात् भयो ? - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
अाज पनि भारी वर्षा, शनिबार कहाँ कति वर्षात् भयो ?
साउन २९ गते, २०७४ - ०६:२३
काठमाडौं । मनसुन बढी सक्रिय भएसँगै अरब सागर र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावले नेपालमा बदली र वर्षात् भएको छ ।
उक्त वायुको प्रभावले शनिबार पनि देशभर वर्षात् भएको र यो क्रम अाइतबार (अाज) पनि जारी रहने मौसमविद् सुजन सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले पश्चिमका केही स्थानबाहेक देशभर बदली छ भने अधिकांश स्थानमा वर्षात् भइरहेको छ ।
शनिबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर वर्षात् भयो । धेरै स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सिमरामा २१७ र सबैभन्दा कम दीपायलमा पाँच मिलिमिटर वर्षात् भएको छ । नेपालगञ्जमा १६९, दाङमा १६७ र जनकपुरमा १३७ मिलिमिटर वर्षात् भएको छ । काठमाडौँमा ३० मिलिमिटर वर्षात् भएको छ ।
दुई दिनदेखि लगातार परेको वर्षा खासगरी पूर्वी, पश्चिम र मध्यपश्चिमका तराई भेगमा बाढीको डुबान छ भने पहाडी भेगमा पहिरोले धनजनको क्षति गरेको छ ।
साउन २९ गते, २०७४ - ०६:२३ मा प्रकाशित